चरीकी प्रेमिका खुश्वु ओलीका अर्का प्रेमी पनि भेटिए | EuropeNepal.Net
चरीकी प्रेमिका खुश्वु ओलीका अर्का प्रेमी पनि भेटिए
Khusbu Oli's(Girlfriend's of Chari) Another x-Boyfriend Found
‘ग्याङस्टार’ दिनेश अधिकारी ‘चरी’ प्रकरण सकिएको छ, तर घटनाको वास्तविकता भने अझै बाहिर आउन सकेको छैन । प्रहरीले मुठभेडमा मारिएका भनेका चरीको मृत्युपछि सबैभन्दा बढी उनकी प्रेमिकाले चर्चा कमाइन् । चरीकी प्रेमिका मोडल खुश्वु ओलीले आफ्ना पूर्वप्रेमीले प्रहरी लगाएर चरीको हत्या गरेको बताएपछि दुई साता यही विषयले मिडियामा चर्चा कमायो । मृत्युको १८ औं दिनमा शनिबार चरीको दाहसंस्कार भइसकेको छ । उनको हत्या भएको भन्दै संसदमा समेत चर्को आवाज उठेपनि गृहमन्त्री वामदेव गौतमले प्रहरीलाई साथ दिएपछि चरीका सहयोगीहरूको प्रहरीलाई कारबाही गराउने अभियान फेल खाएको छ ।
"Gyaङstar 'Dinesh Officers' sorghum' Skiako episode six, seventy Gtnako Aaiun baahir Skeko Aja Can Bne reality. Prhrile Mutbedma increased their Premikale Mariaka discussion Sbabnda Bneka Commain Mrityupchi Criko. Criki killing girlfriend Greko Btaapchi modal Khushwu Criko Lgaar Olile Dui Sentinel Santa Afna Purwpremile discuss the Visyle Commayo Midiama. Mrityuko 18 g औn Dinma Biskeko Snibar Criko funeral. Bako Bnda including killing them Snsdma Diapchi Crika Crco Shyogihruko with voice Utepani Grihmntri Prhreelai Prhreelai Gutmle Karbahi Wamdev Khaako g Graune campaign failed.
उनकी प्रेमिका खुश्वु ओलीको चर्चा भने अझै सेलाएको छैन । आफ्ना पूर्वप्रेमी अर्पण कोइरालाले प्रहरीलाई लगाएर हत्या गरेको उनले बताएकी थिइन् । तर त्यसको कुनै आधार भेटिएन । बरु खुश्वुका भूतपूर्व प्रेमीहरू भने भेटिन थालेका छन् । स्रोतका अनुसार अर्पण कोइरालासँग भन्दा पहिले खुश्वुका प्रेमी अजय पोखरेल थिए । त्यसबेला रोयल क्यासिनोमा काम गर्ने पोखरेल अहिले कान्तिपुर टिभीको एक श्रृङखलामा पनि अभिनय गर्ने गर्दछन् । अजय र अर्पण साथी थिए । केटीहरूलाई घुमाउने र रमाइलो मात्र गर्ने स्वभावका पोखरेलले नै खुश्वुसँग अर्पणको भेट गराइदिएका थिए । अर्पणले खुश्वुलाई माया गर्न थालेपछि अजयले खुश्वुसँग खुशीसाथ नै भेट्न छाडेका दृष्टिमा खबर छ ।
खुश्वुको मायामा अर्पण पागल हँुदै गए र सम्पूर्ण सम्पत्ति सिध्याए । पुख्यौली सम्पत्तिसमेत बेचेर उनले खुश्वुलाई खुशी बनाए र केही सम्पत्ति चरीसँग लागेर क्यासिनोमा सिध्याए । सम्पत्ति सिध्याएपछि खुश्वुको घरमा समेत उनलाई प्रतिबन्ध भयो । यही बीचमा खुश्वुको चरीसँग प्रेम सम्बन्ध गाँसिएको थियो । पैसा सिद्धिए पनि अर्पणको खुश्वुका लागि माया भने बाँकी नै थिए । त्यसकारण फोन गरी खुश्वुलाई धम्क्याउन थाले । यही बीचमा चरी मारिएपछि अर्पण, खुश्वु र चरीबीचको त्रिपक्षीय प्रेमकथा बाहिर आएको हो । तर खुश्वुका अन्य पूर्वप्रेमीहरूसँग कथा भने बाहिर आउनै बाँकी रहेको स्रोत बताउँछ ।
EuropeNepal.Net: चरीकी प्रेमिका खुश्वु ओलीका अर्का प्रेमी पनि भेटिए